Accueil > Gazetin'ny nosy > Fahoriam-bahoaka : Tsy laharam-pamehan’ny depiote
Nankatoavin’ireo solombavambahoaka, ny talata lasa teo, ny fandaharam-potoanan’ny fivoriana hatramin’ny voalohan’ny volana jona ho avy izao. Tolo-dalàna miisa efatra no hodinihana eo anivon’ny Antenimieram­pirenena, dia ny tolo-dalàna momba ny fandraisana anjaran’ny vehivavy amin’ireo toerana fanapahan-kevitra eto amin’ny firenena izay natolotry ny depiote Christine Razanamahasoa ; ny tolo-dalàna mankatoa ny findramam-bola amin’ny fanatanterahana ny tetikasa PRIRTEM I; ny tolo-dalàna momba ny «Agrégation agricole» ; ary ny tolo-pehi-kevitra manangana ny vaomiera mpanao fanadihadiana momba ny trafikana volamena eto amintsika izay naroson’ny depiote voafidy tany Fenoarivo Atsinanana, Mohamad Ahmad; ary ny farany kosa dia ny tolo-dalàna momba ny ITG (Interruption thérapeutique de grossesse) natolotry ny depiote Masy Goulamaly.
Rehefa mijery ireto tolo-dalàna hodinihan’ny solombavambahoaka hatramin’ny faran’ny volana ireto, dia hita fa zavatra tsy tena miantraika amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina. Ny tena manahirana sy mahavaky ny lohan’ny Malagasy amin’izao fotoana dia ny resaka vidim-piainana, ny fahefa-mividy izay anisany ambany indrindra maneran-tany, ary ny tsy fananan’asa. Ireo no tena laharam-pamehana ho an’ny vahoaka, ankehitriny, kanefa tsy mba mandinika izany ireto olom-boafidy voalaza fa solombavambahoaka fa zavatra tsy dia misy dikany no andaniana fotoana. Ekena fa zava-dehibe ny ady amin’ny trafikana volamena, saingy raha mitsangana ny vaomiera mpanao fanadihadiana eo anivon’ny Antenimi­eram­pirenena dia azo antoka fa tsy hampiova na inona na inona izany fa ataon’ireo depiote fitadiavam-bola fotsiny.
Raha ny vidim-piainana ohatra no resahina, azon’ireo depiote atao tsara ny mandinika sy miady hevitra mikasika ny lalàna mety mifanaraka amin’izany. Any Frantsa izay matetika hanaovantsika Malagasy fampitahana, dia dinihan’ny parlemanta ary hiadiana hevitra ny zavatra tena manahirana ny mponina na ny firenena. Tsy mba tahaka izany anefa ny parlemantera eto amintsika satria tsy laharam-pamehana ho azy ireo ny famahana ireo olana tena manahirana ny vahoaka. Rehefa mandeha aza moa ny fotoam-pivoriana eny Tsimbazaza dia zara raha misy solombavambahoaka tonga mivory fa samy manana ny manahirana azy ny tsirairay.